आयुष्मान पनि गर्भवती ? प्रीयंका लेक्छिन् 'हो, हामी गर्भवती छौ' - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २०, २०७७ समय: १९:४१:०२
ईटहरी/ के अभिनेत्री प्रीयंका कार्की गर्भवती भएकी हुन् त ? यो प्रश्नको सामना केही दिन अघिदेखि सामाजिक संजालमा प्रीयंका कार्कीले भोग्दै आईरहेकी छन् । उनको होलिको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक पश्चात् यस्तो प्रश्नको सामना गर्नुपरेको हो । अन्ततः उनले जवाफ पनि दिएकी छन् । तर, लेखाईमा केही त्रुटि भएको बुझ्न सकिन्छ । हुन त प्रीयंका प्रायः चिप्लिरहेकी हुन्छिन ।
आफू गर्भवती अवस्थामा श्रीमान आयुष्मानको आलिङ्गनमा बाधिरहेको तस्विर फेसबुकमा सार्बजनिक गर्दै उनले ‘You can stop asking now ! Yes, we are pregnant’ अर्थात ‘तपाईं अब सोध्न रोक्न सक्नुहुन्छ ! हो, हामी गर्भवती छौं’ । यो लेखाईले दुबैजना गर्भवती भएको कुरालाई प्रष्ट्याउछ । तस्विरको कमेन्टमा पनि धेरैले यो कुरालाई उठाएका छन् । आलोचना र विवादको भुमरिमा परिरहने कार्की अब यो बिषयमा पनि ट्रोलको सिकार बन्ने पक्का छ । जे होस हाम्रो तर्फबाट अग्रिम बधाई ।
इटहरी/ मोडल तथा अभिनेत्री रेश्मा घिमिरेले विवाह गरेकी छन् । उनले अमेरिकामा बस्दै आएका प्रभात बाबुसँग सोमबार लगनगाँठो कसे...
इटहरी/ नेपाली दुई वटा रियालिटी शो ‘मेरो डान्स कप युएसए–५’ र मेरो भ्वाई कप युएसए–२’को उद्घाटन भएको छ । अमेरिकाबाट सञ्चालि...
इटहरी/ कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगै नेपाली निर्माताहरुले फिल्मको प्रदर्शन मिति घोषणा गर्न थालेका छन् । तिहारमा रिलिज भएको...
काठमाडौँ/ राजधानीको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा एकै स्टेजमा ५ विजेता छानिएका छन् । शनिबार अबेर साँझ सम्पन्न प्रतियोगीता ‘...
इटहरी/ यहि शुक्रबार काठमाण्डौको जमलमा अवस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा ‘मिस ग्राण्ड नेपाल २०२१’ सम्पन्न भएको छ । सो...